Lightsgbọ elu, ụgbọ oloko na ụzọ ndị ọzọ | Akụkọ Njem
Ugbo elu, ụgbọ oloko na ụzọ ndị ọzọ
Mariela Carril | | China, Nduzi, Asia njem
Ruo nwa oge ugbu a China na-anọgide n'etiti nnukwu njem Asia ime njem a na-agaghị echefu echefu.
Ọ bụ ahịa ndị njem na-enye ohere njem abụọ a haziri ahazi na njegharị na njem ndị ọzọ, mana mgbe anyị lere anya na map anyị ga-ahụ nnukwu mba dị anya. Enweghi ike ịchọta? Ụzọ adịghị! Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ bụghị nanị na o kwere omume na-abata site ụgbọelu ...
1 Ga China na njem ụgbọ mmiri mba ụwa
2 Ga ụgbọelu na China
3 Gaa China site na ala
Ga China na njem ụgbọ mmiri mba ụwa
Ee, ọ bụ nhọrọ ị nwere ma ọ bụrụ na ị sonyere njem obi ụtọ na ọ bụ otu n'ime ndị otu ndị njem họọrọ karịa afọ 50.
Crugbọ mmiri ụgbọ mmiri mba ụwa na njedebe ikpeazụ Beijing rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri Tianjin site na ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia dum ma n'ezie, site na Hong Kong. Mgbe Shanghai na isi obodo n'onwe ya, Jin dị ka ha na-agwakarị obodo a, ọ bụ nnukwu obodo nwere ihe nke ya maka ndị njem nleta.
Lonilọ ndị ọchịchị nwere ụdị dịgasị iche iche, gụnyere nke ndị Europe, saịtị ndị nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme nke gbasara ọtụtụ narị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ puku afọ (enwere nnukwu mgbidi dị nso, Huangyaguan Pass), na gastronomy dị ụtọ ma baa ọgaranya.
Ụlọ ọrụ ahụ Royal Caribbean nwere ụgbọ mmiri na-aga Tianjin. na Nkwalite of na Osimiri, dịka ọmụmaatụ. E nwere ụgbọ mmiri ndị na-apụ na Hong Kong ma ọ bụ enwere njem na-emetụ ebe na Japan.
Companylọ ọrụ a na-eme nke ọma na onye ama ama ama ama nke China bụ Fan Bingbing bụ nne mmiri nke ụgbọ mmiri a, nnukwu ụgbọ mmiri ikpeazụ n'ụgbọ mmiri. Ọ bụrụ na ụgbọ mmiri na-amasị gị, ọ bụghị ụgbọ elu, lee anya na onyinye ha n'ihi na ị nwere ike ịgagharị n'akụkụ a nke ụwa (gụnyere South Korea, Vietnam na Japan),, na nnukwu okomoko ụgbọ mmiri.
Ga ụgbọelu na China
Ọ bụ ihe kasị eji nhọrọ ọnụ ụzọ mbata na-abụkarị Beijing ma ọ bụ Hong Kong. O doro anya, na Shanghai mgbe ọ na-abịa site na mba ndị ọdịda anyanwụ.
Site n’etiti ndị a «ibo ụzọ»Ikekwe nhọrọ kachasị mma bụ Hong Kong n’ihi na ọ na-adịkarị ọnụ ala ma nwee ogologo visa. Kedu ihe ọzọ, ọ dị mma N'ihe metụtara ebe a na-ahụkarị akpa azụ, karịa nke ahụ n'onwe ya ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma na-enye ụdị nnabata nke China n'ozuzu.
Gaa China site na ala
Ọ bụrụ na ị na-agagharịrị n'akụkụ a nke ụwa ị nwere ike ịbịaru site na ala ma mee ka ókèala gafere site n'ọtụtụ ebe n'ihi na China bụ a ukwu nnukwu obodo.
Site na Pakistan ị nwere ike ịgafe n'okporo ụzọ awara awara karakoram wee ruo Kashgar, na mpaghara Xinjiang. O nwere ike ọ gaghị abụ ebe kachasị mma na-atụle ọnọdụ dị na Pakistan na nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke China nwere na ndị Alakụba pere mpe ebe a.
Site na Laos ị nwere ike isi na Boten gafere Mengla, na mpaghara Yunnan. Site na Nepal maka TibetO doro anya, ọ bụ ezie na ọ na-echeta okwu niile nke visa na ikike pụrụ iche. Site na Vietnam enwere nhọrọ dị iche iche atọ:
maka Enyi na Enyi gafee Nanjing
site na Lao Cai ruo Kumning
site na Mong Cai ruo Dongxing
Ofefe kachasị ọnụ ala bụ nke mbụ N'ihi na ịnwere ike iji ụgbọ ala abalị gaa Dong Dang wee si ebe ahụ kwụọ ọgba tum tum iji gaa kilomita ole na ole gaa Enyi Enyi, Yeyi Guan n’asụsụ Chinese o kwoo nghi Quan n’asụsụ Vietnamese.
Kè-ala ebe a ga-emepe na 7 n'ụtụtụ, Ruo elekere anya 4 nke mgbede. Ozugbo ị gara n'akụkụ ndị China, ị ga-aga n'okporo ụzọ gaa n'okporo ámá ma chere maka ụgbọ ala ahụ na Pinxiang, 10 kilomita, site na ebe ị nwere ike ịnwe ụgbọ ala mgbe niile na-aga Nanning. Site ebe ahụ Guilin bụ otu ụgbọ ala abalị ọzọ ...
Nhọrọ ọzọ bụ iwere ụgbọ oloko mba si Hanoi. Ọ na-apụ ugboro abụọ n'izu, Tuesday na Fraịde elekere abụọ nke mgbede wee bịarute Beijing ụbọchị abụọ ka e mesịrị na elekere ise nke mgbede. O rutere Pianxing n’etiti abalị, Nanning n’elekere 2:5 nke ụtụtụ na Guilin na 8:40 nke abalị. Ọ bụ dị mfe ma dị oke ọnụ, Ee n'ezie.
Na nhọrọ nke abụọ, ị ga-ebu ụgbọ oloko abalị abalị gaa Lao Cai, gafee ókè ebe ahụ wee banye ụgbọ oloko ma ọ bụ bọs ọzọ site na Kunming ruo Hekou. Traingbọ okporo ígwè na-agba ebe a ugboro abụọ n'izu, Fraịde na Sọnde, si Hanoi. Ọrụ a na-apụ na 9:30 pm wee rute Kunming North Station na 7:25 am.
Ikwu okwu banyere ụgbọ oloko na-ewu ewu ma mara mma -Gbọ okporo Siberia na Trans-SiberiaMongolian ọ bụkwa nhọrọ. Ọ bụrụ na ị bụ en Kazakhstan ị nwere ike isi na Almaty gafere banye Urumqi o Na-eju, ma ọ bụrụ na ị nọrọla n'ókèala ndị China, na Hong Kong na Macao, n'ihi na ịgafe ókèala dị mfe ma dị nso.
Dị ka ị ga-ahụ na nhọrọ Ingsgafe ókèala ụzọ dị n’etiti China na ndị agbata obi ya bụ ụzọ ma ọ bụ ụgbọ oloko na-eme ya mere e nwere ọtụtụ ụgbọ ala na-abịa ma na-aga kwa.
Site ọwụwa anyanwụ ị nwere ike iru mba ahụ site na ngafe uzo abuo na Vietnam nakwa esi Mianmaa na Laos. Site na Pakistan anyị ekwuola ya, site na Karakoram Pass na site na Nepal site na El Tibet.
Buru n'uche na enweghi uzo di n'etiti China na India nke mepere Mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị adịchaghị mma ugbu a. Ruo ugbu a, anyị na-ekwukarị banyere bọs, ehihie na abalị, mana ... Nwere ike ịnya ụgbọ ala?
Eziokwu bụ na echiche ndị mmadụ n'ozuzu na-emesi eziokwu ahụ ike ọ dịtụ ize ndụ ma na-eduhie jiri ụgbọ ala gaa China ma ọ bụrụ na ị bụ onye mba ọzọ na-enweghị a sara mbara iwu nke asụsụ. Gburugburu ebe a ndi mmadu anaghi asụ bekee ma mee ka onwe gị ghota ha nwere ike ịbụ ọkụ mmụọ.
Na mgbakwunye, ntinye kachasị mma iji ụgbọ ala mee bụ site na El Tibet, ebe dị ezigbo oyi na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ niile. You ka na-eche ya? Mgbe ahụ ị kwesịrị ịma na site na Nepal ị nwere ike ịgafe ụgbọ ala na ókè n'etiti Kodari na Zhang mu, na ndidi n'ezie, nke ahụ bụ akwụkwọ edemede.
I nwekwara ike banye n'ụgbọala esi Mianmaa. Ihe a niile na visa na iji na akwụkwọ ụgbọ ala. Na Akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala si obodo gị, ikike nwa oge nke gọọmentị China nyere na ikike mba ụwa, adịghị ama ama.
I gha iburu n'uche na Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnya ụgbọ ala na China, ị ga-emerịrị ka njem gị mara tupu oge eruo. Na China, ndị mba ọzọ nwere ike ịnya ụgbọ ịnyịnya n'ụzọ ụfọdụ yabụ ọ bụrụ na ndị a bụ atụmatụ gị, gbaa mbọ hụ na ozi niile dị n’ụlọ ọrụ ndị nnọchi anya mba gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Ugbo elu, ụgbọ oloko na ụzọ ndị ọzọ
Luis ọhụrụ dijo
enyi, ị nwere ike ịga china? Enwere m mmasị ịmara ndụmọdụ na ihe, Achọrọ m ịga!
Zaghachi luis cus
Oge ezumike 5 site na London
Guatapé, obodo kachasị mma na Latin America